prokaryotic သက်ရှိ-အားလုံးသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိ-နေကြသည်သမားရိုးကျအမြှေးပါး-ခညျြနှောငျ organelles ချို့တဲ့အဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့် eubacteria နှင့် archaebacteria ပါဝင်သည်ထားတဲ့၏သော်လည်း Eukaryotic သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိ, အမြှေးပါး-ခညျြနှောငျဆဲလ် organelles အပိုင်များနှင့်မှိုနှင့် protists ပါဝင်သည်။ microbiologist အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှု, အစွန်းအထင်းများနှင့် microscopy အပေါ်မှီခို။ သို့သော်ဘုံ enviroments မှာလက်ရှိအဆိုပါသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ထက်နည်း 1% လက်ရှိနည်းလမ်းများသုံးပြီးအထီးကျန်မှုတွေအတွက် cultured နိုင်ပါသည်။  microbiologist မကြာခဏထိုကဲ့သို့သော DNA ကို sequence ကိုအခြေပြုဖော်ထုတ်ခြင်း, ဘက်တီးရီးယားဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုဥပမာ 16 တိုက်လေယာဉ် rRNA ဗီဇ sequence ကိုအဖြစ်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ tools များအပေါ်မှီခိုနေရသည်။
အဏုဇီဝဗေဒသာမန်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သက်ရှိများ၏လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစုပေါင်း '' အဏုဇီဝ '' အဖြစ်လူသိများဘက်တီးရီးယား, archaea, ဗိုင်းရပ်စ်တွေမှို, prions, protozoa နှင့်ရေညှိ, ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားပိုးမွှားအာဟာရစက်ဘီးစီးခြင်း, ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီး / biodeterioration, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, အစားအစာ spoilage, ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဇီဝနည်းပညာအတွက်အဓိကသော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကစား။ အသက်ကယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအောင်, ဇီဝလောင်စာများထုတ်လုပ်, ညစ်ညမ်းမှုတက်သန့်ရှင်းရေးများနှင့်ထုတ်လုပ် / အပြောင်းအလဲနဲ့အစားအစာနှင့်သောက်သူတို့၏ဘက်စုံမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အဏုဇီဝနည်းလမ်းများစွာအတွက်အလုပ်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
microbiologist ပိုးမွှားလေ့လာများနှင့်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းထားသည်သောအရေးအပါဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိအချို့ထိုကဲ့သို့သော Jenner နှင့်ကျောက်ရောဂါဆန့်ကျင်သည်သူ၏ကာကွယ်ဆေး Fleming ကနှင့် penicillin ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, မာရှယ်နှင့် Helicobacter အကြား link ကို၏ဖော်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်ကျော်ကြားခေတ်မီကရိယာပစ္စည်းတွေသုံးပြီး၏သုတေသနကနေရလဒ်ပါပြီ pylori ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများနှင့်အစာအိမ်အနာနှင့် papilloma virus ကိုနှင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ထုတ်သူကိုဇုရ Hausen ။
အဏုဇီဝဗေဒသုတေသနခဲ့လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောထေိုငျမွကွေီးပျေါမှာကျန်းမာသောလူဦးရေအဘို့အစားအစာ, ရေနှင့်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းအဖြစ်လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ, များစွာသောတွေ့ဆုံဖို့အလယ်ပိုင်းဖြစ်ဆက်လက်သိရသည်။ အဏုဇီဝဗေဒသုတေသနကိုလည်း ''? ဘဝကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်မည်သို့မည်ပုံကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပါတယ် '' ကဲ့သို့သောကြီးတွေမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကူညီပေးပါမည်နှင့် '' အသက်သည်ဠာထဲမှာတခြားနေရာတည်ရှိပါဘူး ''?
အချိန် post: ဒီဇင်ဘာ-04-2018